सुरू भयो मुक्तक प्रतियोगिताको आठौँ चरण | साहित्यपोस्ट
साहित्यपोस्ट	 भाद्र २६, २०७७ १९:०० मा प्रकाशित
साहित्यपोस्टले मुक्तक प्रतियोगिताको आठौँ चरण सुरु गरेको छ । यसअघि यसका सात चरण सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेका छन् ।
साहित्यपोस्टका अनुसार प्राप्त मुक्तकहरूलाई विज्ञ समालोचक एवं मुक्तक विधामा नाम चलेका व्यक्तिहरूको रहोबरमा छानिनेछ । यसरी छानिएका तीन मुक्तककारका तीन–तीन मुक्तकहरूलाई वर्षको अन्त्यमा उत्कृष्ट मुक्तकहरूको संगालो प्रकाशन गरिने छ । त्यसैगरी पुस्तकको डिजिटल कपी साहित्यपोस्टमा पढ्न र सुन्नसमेत पाइने छ ।
उत्कृष्ट मुक्तकहरूमध्येबाट पनि सर्वोत्कृष्ट तीन मुक्तकहरूलाई सार्वजनिक अभिनन्दनसहित आकर्षक नगद पुरस्कार पनि प्रदान गरिने छ ।
साहित्यपोस्ट	 आश्विन ५, २०७७ १९:००
साहित्यपोस्ट	 आश्विन ४, २०७७ २१:२५
साहित्यपोस्ट	 भाद्र २५, २०७७ २०:००
साहित्यपोस्ट	 भाद्र १७, २०७७ १९:००
मुक्तकका निर्णायकहरूमा चर्चित समालोचक, साहित्य अन्वेषक प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मणप्रसाद गौतम रहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दुई दशकदेखि अध्यापनरत गौतमका दर्जन बढी अनुसन्धानात्मक–समालोचनात्मक कृति प्रकाशित छन् । गौतमले एक दर्जन बढी पुस्तकको सम्पादन पनि गर्नुभएको छ । नेपाली साहित्यमा मुक्तकको पहिलोपटक सैद्धान्तिक र व्यवहारिक ज्ञान दिने व्यक्ति पनि गौतम नै हुन् ।
अर्का निर्णायकमा ज्ञानु अधिकारी रहेकी छन् । समालोचनामा विशेष रुचि राख्ने ज्ञानुका १५ कृति प्रकाशित छन् भने ६ वटा फरक विषयमा अनुसन्धान गरेकी छन् । पद्मकन्या क्याम्पसमा अध्यापनरत ज्ञानु नेपाली साहित्यकी चर्चित समालोचकमध्येकी एक हुन् । अन्य दुई जना निर्णायकहरूमा साहित्यपोस्टकी मुक्तक सम्पादक निशा केसी र प्रधानसम्पादक अश्विनी कोइराला रहेका छन् ।
नेपाली चलचित्र जगतमा यो समय अधिकांश कलाकारहरु विवादमा आइरहेका छन् । विशेषतः महिला कलाकारहरुको सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक रुपमा ट्रोल गरिँदै आइएको छ । यो शृङ्खलामा हामीले यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर तीन विषय दिएका छौँ ।
यो शृङखलाको नियम र विषय यसप्रकार छ ।
– एकपटक पुरस्कृत भइसकेका मुक्तककारलाई प्रतियोगितामा समावेश गरिने छैन । (चौथो चरणबाट थप गरिएको)
— यसअघि अनलाइन,छापा वा स्मारिकाहरूमा प्रकाशन भइसकेका मुक्तकलाई प्रतियोगितामा सामेल गरिने छैन । तर आफ्नो फेसबुक वालमा राखिएका मुक्तकहरू भने स्वीकार गरिने छन् ।
यो साताको विषय यसप्रकार रहेका छन् ।
१. पहिलो मुक्तकको विषयः नेपाली चलचित्र (यसलाई छुने जुनसुकै विषय वा घटना)
२. दोस्रो मुक्तकको विषयः महिला कलाकार (यसलाई छुने जुनसुकै विषय वा घटना)
३. तेस्रो मुक्तकको विषयः सामाजिक सञ्जाल (यसलाई छुने जुनसुकै विषय वा घटना)
यो साताको प्रतियोगिता अहिल्यैबाट सुरू भई अर्को साताको शनिबार ( असोज २ गते) रातको १२ बजेसम्म रहनेछ ।
यो खुला प्रतियोगिता हो । यसका लागि यही पेजको तल कमेन्ट बक्समा आफ्ना तीन वटा रचना पोस्ट गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक विषयमा एउटा मात्र मुक्तक स्वीकार गरिनेछ ।
साहित्यपोस्ट 2279 लेखहरु0comments
तीर्थ श्रेष्ठको एकल मुक्तक वाचन हुँदै